११ प्रतिशतले बढ्यो निक्षेप सुरक्षण | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर ११ प्रतिशतले बढ्यो निक्षेप सुरक्षण
१ करोड ७० लाखभन्दा बढीको; निक्षेप सुरक्षण निक्षेप सुरक्षण रकम ५ प्रतिशत वृद्धि
एकसाता भित्रमा एसईई परीक्षाको नतिजा आउने -
काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले चालू आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को कात्तिक मसान्तसम्ममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका १ करोड ७० लाख २२ हजार ७ सय २७ जनाको निक्षेप सुरक्षण गरेको छ । गत आव २०७३/७४ को अन्त्यसम्ममा कोषले १ करोड ५३ लाख ८ हजार ८ सय १५ जना निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गरेको थियो । गत आवको तुलनामा चालू आवको ४ महीनामा निक्षेप सुरक्षण गरिएका निक्षेपकर्ताको सङ्ख्या १७ लाख ३ हजार ९ सय १२ ले बढेको कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विष्णुबाबु मिश्रले जानकारी दिए । यो वृद्धि प्रतिशतका हिसाबले ११ दशमलव १२ प्रतिशत रहेको छ ।
निक्षेप सुरक्षणबाहेक कोषले कर्जाको समेत सुरक्षण गर्दै आएको छ । सोअनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा पशुधन सुरक्षणअन्तर्गत ३ हजार १ सय २० ओटा पशुधन सुरक्षण भएको छ । ती पशु २ हजार ४ सय ७ जना कृषकले विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट रू. १७ करोड ४० लाख ४८ हजारबराबरको कर्जा लिएर खरीद गरेका थिए । यसैगरी कात्तिक मसान्तसम्ममा मझौला तथा साना उद्यम कर्जाअन्तर्गत रू. २० करोड ७७ लाख १४ हजार कर्जा सुरक्षण छ । यस्तै कृषिकर्जाको रू. ६६ करोड ५६ लाख ६२ हजार र लघुवित्ततर्फको रू. ८ अर्ब ५९ करोड ६ लाख ८७ हजार कर्जा सुरक्षण गरिएको छ ।